नेपाल आज | भारतले कसरी केपी ओलीलाई फसाउन खोजेको रहेछ, गोप्य विषय सार्वजनिक
भारतले कसरी केपी ओलीलाई फसाउन खोजेको रहेछ, गोप्य विषय सार्वजनिक
काठमाडौं । झुलाउने र झारा टार्ने भारतीय चलन नबुझेका प्रधानमन्त्री होइनन् केपी ओली । त्यसैले भारत भ्रमणका दौरान भारतीय पक्षको व्यवहार र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति फेला परेको छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्री कै डायरीमा ।
अत्यन्तै महत्वका साथ भारतीय पक्षबाट कुरा आयो, अरुण तेस्रोमा सही गरौं । शुभारम्भ गरौैं भन्ने । ओलीले भने, ‘मैले कसरी गर्न सक्छु ? पिपिएमा भारतले सही गरेको छैन । नेपालको आफ्नो कानुन छ । फर्म अफ पेमेन्ट अर्थात भुक्तानी प्रक्रियाबारे केही पनि स्पष्ट भएको छैन । ती सबै कुरा टुंगो नलागी म सही गर्दिनँ ।’
भारतीयले मुख हेराहेर गरे, इशारा इशारामै केही सल्लाह जस्तो भयो क्यार, त्यसपछि केही बोलेनन् ।
अर्को बहुचर्चित विषय हो, रेलमार्ग । भारतीय पक्षबाट लामो समयदेखि रेलमार्गबारे जतिसुकै हल्ला चलाइए पनि आखिरमा नियत रहेछ, सर्भे गर्ने, छाडिदिने । त्यसबारे प्रमसँग कर्मचारी कुरा गर्न पुगे । उनीहरुले रिपोर्टींग गरे । भने, ‘रेलमार्ग त बनाउने तर कसको खर्चमा ? यो कुराको टुंगो लागेन !’
यत्ति भनेपछि प्रम ओलीलाई काम पुग्यो । अनुहारमै आक्रोश फैलियो । भने, ‘हामीसँग पैसा भएको भए, सबै व्यवस्था भएको भए, हामी आफ्नै खर्चमा सीमासम्म रेल बनाइहाल्थ्यौं नी । सक्छन् भने बनाउनु, सक्दैनन् भने हल्ला गर्दै नहिड्नु । ’ ओलीले थपे, ‘यसो भन्दा संयुक्त विज्ञप्तिमा साइन गर्दैनन् भने नगरौं । पहिला पनि संयुक्त वक्तव्य जारी नगर्दा भएको थियो भने अहिले पनि त्यही हुन्छ ।’
त्यहाँ पुगेका कर्मचारीले खबर लगे भारतीय अधिकारीकहाँ । फेरि अर्को उल्झन आयो । पहिल्यै सहमति भइसकेको बनेपा, पतौतीमा प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउने । त्यसका लागि दिइने भनिएको जमिनको कुरा पनि उल्लेख गरेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरा आएपछि प्रम ओली फेरि पड्किए, ‘ हिजो सहमति, सम्झौता भइसकेको कुरा फेरि फेरि संयुक्त विज्ञप्तिको चाङ लगाएर केही हुन्न । हिजो पनि विज्ञप्ति जारी नगर्दा भएकै थियो । अहिले पनि त्यही गरौं, केही फरक पर्दैैन ।